Abakhiqizi bakwa-Elevator Escalator Tooling Production Line - I-China Elevator Escalator Tooling Production Line Suppliers & Factory
I-Working Principle Escalator luhlobo lwemishini eqhubekayo egijimayo ebunjwe ngesixhumo se-chain sakhiwo esikhethekile nesendlulisela ngebhande lesakhiwo esikhethekile. Inezinzuzo eziningi ezifana nomthamo omkhulu wezinto zokuhamba, izisebenzi zokuhamba ngokuqhubekayo. Ngakho-ke isidingo sokuphepha siphakeme kunenye imishini. Isetshenziswa ikakhulukazi ezindaweni zomphakathi ezinokugeleza kwabantu okugxile, njengezitolo ezinkulu zezitolo, amakilabhu, iziteshi, izinkundla zezindiza kanye nama-wharfs. Ukwakha Idrayivu enkulu yanele ...
Ukunemba okuphezulu, isikhungo sokuqina kwamandla adonsela phansi, ukuguquguquka okuphezulu kokuguquguquka. Ukusetshenziswa kwesilinganiso sobude obujwayelekile nezilinganiso ezenzelwe i-U kwenza idatha inembe kakhudlwana. Imoto yama-gantry ilawulwa yiJapan Panasonic servo motor, enokuqina okuphezulu. Kusetshenziswa uhlelo oluhlanganisiwe lwe-Keyence, iphaneli yokulawula isikrini sokuthinta yezimboni, ukusebenza kulula futhi kunokwethenjwa kakhulu. Idatha yokulinganisa, njll. Ingagcinwa ngokuzenzakalelayo kudathabheyisi ukwenza lula umbuzo wesicelo esizayo kanye nokulandela umkhondo womkhiqizo.